Nouvelle Calédonie, zoro kely an'izao tontolo izao | Vaovao momba ny dia
Nouvelle Calédonie, zoro kely eto amin'izao tontolo izao
Mariela Carril | | mpitarika, Oseania
Tiako ny mijery ny sarintanin'izao tontolo izao ary mahita ireo tany izay efa henoko angamba fa tsy azoko antoka hoe aiza marina izy ireo. Izany hoe, fantatro ny misy azy ireo fa amin'ny sarintany dia hitako hoe aiza marina izy ireo, akaikin'ny firenena hafa ary azoko an-tsaina ny endrik'izy ireo, ny toetrany, ny kolontsain'izy ireo.
Te hanana vola hivezivezena amin'izay sitrako aho, na lavitra na sarotra ny ho tonga, na dia mieritreritra an'izany aza aho izao, tsy misy toerana tsy azo tanterahina na dia kitapo fotsiny aza. Ny zava-dehibe dia ny faniriana. Ka izao no anjarantsika New Caledonia, any amin'ny Oseana Pasifika ary tsy lavitra an'i Aostralia.
2 Inona no hitsidika an'i New Caledonia
3 Vaovao azo zahana amin'ny fitsidihana an'i New Caledonia
Nosy izy io dia eo atsimo atsinanan'ny Ranomasimbe Pasifika ary an'i Frantsa. Mampisaraka azy manodidina izy ireo 1200 kilometatra miala an'i Aostralia ary dia ampahany amin'ny nosikely fantatra amin'ny anarana hoe Melanasia. Ny nosy dia manana 18.500 kilometatra toradroa ary onenana olona 270 eo ho eo, ao anatin'izany ny teratany eropeana, ny vahoaka kanak, ny olona polineziana ary koa ny Afrika sy Azia atsimo atsinanana.
Ny renivohitra dia Noumèa. Ny nosy dia hitan'i James Cook tamin'ny 1774, kapiteny anglisy sy mpikaroka tany anglisy izay tonga tany Aostralia sy Nouvelle-Zélande koa tamin'ny diany. Nomeny ny anarany Caledonia izany satria ny ampahan'ny jeografia misy azy dia nampahatsiahy azy an'i Ekosy, fa lasa fananan'i Frantsa ny nosy tamin'ny 1853.
Nitranga izany zanatany famaizana maro taorian'ny korontana tany Paris tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX. Manodidina io fotoana io dia nitondra sy monina avy amin'ireo nosy akaiky ny anglisy sy ny frantsay hiasa amin'ny toeram-pambolena ary taorian'ny nahitana nikela ireto andevo maoderina ireto dia niafara tany amin'ny toeram-pitrandrahana. ny olona tany am-boalohany, ny KanakNatao tany amin'ny famandrihana izy ireo ary nisy fikomiana marobe.
Raha ampiantsika amin'izany ireo aretina naterak'i Continent taloha, dia vitsy an'isa ny Kanak. Efa tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nanjary fototra ho an'ny Amerikanina ny nosy ary taorian'ny Ady lehibe faharoa dia lasa ara-dalàna a Faritany frantsay any ampitan-dranomasina.
Mikasika ireo zaridainan'i Nouvelle-Calédonie dia tao amin'ny kontinanta super Gondwana ary maro no mino fa nisaraka tamin'i Aostralia tokony ho 66 tapitrisa taona lasa izay. Misy tandavan-tendrombohitra afovoany misy tendrony 1600 metatra, velaran-tany lehibe, tanety, zavamaniry betsaka ary faritra maina sy vatolampy midina any anaty rano aza. Variadito.
Tropikaly ny toetrandro miaraka amin'ny vanim-potoana mando manomboka ny volana novambra ka hatramin'ny martsa, manodidina ny 30 ° C, ary ny vanim-potoana maina eo anelanelan'ny volana jona sy aogositra miaraka amin'ny 23 ° C farafaharatsiny. Eo anelanelan'ny Desambra sy aprily dia vanim-potoanan'ny rivodoza.
Inona no hitsidika an'i New Caledonia
Azonao zaraina amin'ny faritra / toerana dimy ny nosy: ny renivohitra Nouméa, morontsiraka andrefana, morontsiraka atsinanana, atsimo ary ireo nosy. Andao atomboka amin'ny renivohitra naorin'ny frantsay tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Tanàna amoron-tsiraka izy ary misy bay maromaro misy torapasika mahafinaritra. Jereo ny lagoon izay niantsonan'ireo eropeana voalohany tamin'ny taona 1853. Misy nosy kely roa hita fa afaka minitra vitsy, toy ny mandany maraina.
Ny tanàna dia tena kolontsaina ary manana tranombakoka, galerie, sinema ary faritra fanjanahan-tany misy trano taloha azo tsidihina. Manodidina ny 100 ny mponina ary afaka mankafy ny moron-dranomasina misy azy ianao, nefa koa ny bara, trano fisakafoanana ary fivarotana. Misy trano filokana roa aza. Aza adino ny mitsidika ny Aquarium an'ny Lagoon, ny valan-javaboary, ny Zoo, ny foara an'ny Coconut Plaza ary raha tianao ny mandeha dia misy ny Làlana Nouville mankany Fort Tereka.
Manohy ny morontsiraka andrefana: samy manana ny endriny izy io ka misy avy fambolena amin'ireo faritra toa ny volana. Miasa amin'ny toeram-pambolena ny koboy, izay hampahatsiahy anao ny American Wild West fa rehefa manatona ny morontsiraka ianao dia lasa tropikaly ny tontolo iainana, miaraka amin'ny honko ary zava-maniry maro be.
Ity misy endrika voajanahary hafahafa iray izay nivoatra tao anaty ala honko. Izy io dia manana endrika fo ary ao Voh. Hatramin'ny nalain'ny sarin'i Yann Arthus-Bertrand sary azy tamin'ny taona 1990, dia nalaza eran'izao tontolo izao izy: Coeur de Voh. Raha te hahalala bebe kokoa dia misy ny Museum Eco ao amin'io faritra io. Misy tanàna maro any amin'ny morontsiraka andrefan'i New Caledonia ary noho izany dia misy lova ara-kolontsaina koa ao amin'ny Petroglyph Montfaoué ary amin'ny tanimanga fahiny hita any amin'ny faritra, ankehitriny ny harem-pirenena.
UNESCO dia nanome voninahitra ny lagoon amoron-tsiraka andrefana miaraka amin'ny Lova manerantany. Izy io dia iray amin'ireo faritra tsara tarehy indrindra amin'ny nosy satria manana haran-dranomasina lenticular izay miainga avy any Bourail ka hatrany Moindou ary misy nosy mahafinaritra sasany toa ny Ténia islet, adiny iray monja avy eo an-drenivohitra ary mitaingina sambo 20 minitra avy any amin'ny morontsirak'i Boulouparis. toerana filentehan'ny masoandro, snorkel, milomano ary mankafy izy io.
Manodidina anao eto dia afaka mitsidika ny toeram-pitrandrahana varahina Pilou ianao izay niasa teo anelanelan'ny taona 1884 sy 1931 ary nandeha namakivaky ny ranon'ny renirano Fayard. Ny tandavan-tendrombohitra afovoan'ny nosy dia mizara azy roa, ny ilany andrefana ary ny morontsiraka atsinanana: ity morontsiraka ity dia iharan'ny rivotra mahery sy mando kokoa noho izany miroborobo kokoa ny endriny. Manomboka any Pouebo ka hatrany Ponerihouen, mihodina eo anelanelan'ny tendrombohitra sy ny ranomasina.
Tanàna maro no amin'ity lalana ity ary eo ambanin'ny ranon'ny ranomasina dia misy zavamaniry sy biby mahafinaritra, manan-karena be: stingray, ranomasina, haran-dranomasina, anemone. Misy nosy sy nosy ary hatsaran-tarehy be dia be.
El South South Izy io dia faritra iray misy tanàna roa, Mont-Doré sy Yaté ary mampiavaka azy amin'ny loko telo samy hafa: ny ala mando miaraka amin'ireo maitsoany, ny Mar miaraka amin'ny manga sy ny Tany mena. Ity ny valan-javaboary lehibe indrindra ao amin'ny firenena, ny Valan-paritany Rio Azul, tsara amin'ny diabe, kayak ary maro hafa. Izy io koa dia manana ny Rano madeleine ary lalana botaniika tena tsara. Toy izany koa no mitranga amin'ny Tahiry N'Dua avy amin'ireo masonao aiza no ahitanao ny trozona humpback miteraka eo anelanelan'ny volana Jona sy septambra.
Manana ny zava-drehetra ny Great South raha toa ka fanananao ny natiora, dia toy ny nosy iray manontolo izay mifantoka amin'ny sehatra iray. Fa hoy izahay tamin'ny voalohany fa misy koa nosy sy nosy hafa: amin'ny fitambarany dia misy dimy: Maré, Tiga, Lifou, ny Nosy Pines ary Ouvéa. Samy manana ny mombamomba azy avy. I Ouvéa dia manana torapasika fotsy mirefy 25 kilometatra mahavariana miaraka amin'ny felatanana ary toerana fisitrihana tsara.
Manana tora-pasika, hantsam-bato avo, ala ary lava-bato koa i Lifou. Tena mifanohitra be izany ary tena atoro anao ny fitsidihanao. Marake kokoa i Maré ary hatsaran-tarehy paradisa ny nosy Pinos.
Vaovao azo zahana amin'ny fitsidihana an'i New Caledonia
Manana ny volany manokana ilay nosy, ny Pacific Franc izay ampiasaina any Tahiti, ny CFP na XPF ihany koa. Tsy ao anatin'ny fifanarahana Schenghen izy ioNa dia amin'ny ankapobeny aza dia tsy ilaina ny Visa, tokony hojerenao raha ao anaty lisitra ny firenenao. Ary raha tsy frantsay ianao dia tokony afaka manamarina ny toerana hijanonanao. Tsy mila vaksiny manokana amin'ny zavatra rehetra ianao saingy mamporisika izy ireo hanana vaksinin'ny Hepatyis A sy B.
Misy tazo ve? tsy, saingy misy moka eo anelanelan'ny volana novambra sy aprily, avy eo nanjavona izy ireo, ka alao ny fanafody ary alao antoka fa mandeha amin'ny faritra tropikaly izy io satria mahery be ny moka eto. Manoro hevitra izy ireo ny hitandrina amin'ny trondro vaovao fa tsy amin'ny zavatra hafa.
Na dia tropikaly aza ny toetrandro, dia manana ny vanim-potoana i New Caledonia ary raha handeha ianao eo anelanelan'ny volana oktobra sy mey dia mafana be izy ary eo anelanelan'ny volana jona sy septambra dia mihamangatsiaka kokoa ary be rivotra ka tsara ny mitondra palitao. Mikasika ny fitaterana dia manana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny renivohitra ary avy eo ny fomba mety indrindra handehanana dia amin'ny fiara, ao amin'ny bisy eo an-toerana ary raha misy mifindra any amin'ny nosy hafa ao sambo na fiaramanidina. Afaka mandeha matetika ianao ao anatin'ny renivohitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Oseania » Nouvelle Calédonie, zoro kely eto amin'izao tontolo izao
Mahalalà an'i Bali mandritra ny 10 andro amin'ny 1.141 euro
Leeuwarden sy Valletta, renivohitry ny kolontsaina eropeana 2018